नेपाल-भारत बैठक : तितो मेट्ने पहल मात्रै - Kantipath.com
नेपाल-भारत बैठक : तितो मेट्ने पहल मात्रै
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमार्फत दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा रहेको तिक्तता मेट्ने पहल भएको छ।
काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपाल र भारतबीच थाती रहेका समग्र विषयमा छलफल भएको हो।
दुईदिने भनिएको बैठक एकै दिनमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय पक्षबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले नेतृत्व गरेका थिए।
बैठकमा नेपाल र भारतबीच पाँच फरकफरक ‘क्ल्सटर’ बनाएर तीन दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रले तयार पारेको विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन समीक्षासँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली, गण्डक, सीमामा हुने डुबानलगायतका विषयलाई विशेष महŒव दिएको थियो।
यसअघि सहमति भएर अलपत्र परेका मुद्दामा पनि छलफल भएको छ। तर, ती सहमति के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइएको छैन। सहमति रद्द गर्दा त्यसबाट पर्न आउने असरको आंकलन दुवै पक्षबाट हुन नसक्दा निर्णय हुन ढिलाइ भएको छ।
आयोग गठनको २२ वर्षपछि २०७१ साउनमा तेस्रो बैठक बसेको थियो। दुई पक्षबीच त्यसपछिका सहमति र २०७३ कात्तिकमा दिल्लीमा भएको आयोगको चौथो बैठकले अघि बढाएको विषयमा छलफल भएको छ। परराष्ट्र सचिव र राजदूतको निगरानी संयन्त्रले गरेको कामको समीक्षा बैठकमा भएको छ। अन्नपूर्ण दैनिक
Previous Previous post: बसपार्क नहुदाँ ट्राफिक ब्यबस्थापनमा समस्या
Next Next post: भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्व अर्थमन्त्री पी चितम्बरम पक्राउ
प्रधानमन्त्री ओलीले जे बोले पनि हुन्छ ?
किन बिक्यो सरकार ? कतिमा बेचियो गोकर्णको कुर्सि ?
ओलीलाई स्वास्थ्य समस्या, महाधिवेशनबाट बाहिरिए
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार ९९ पुग्याे
ओलीको तेस्रो पटक डायलाइसिस